Maxaa ka dhacay Marinka Gaza kadib heshiiskii xabad-joojinta ee Xamas iyo Israel? - Caasimada Online
Home Dunida Maxaa ka dhacay Marinka Gaza kadib heshiiskii xabad-joojinta ee Xamas iyo Israel?
Gaza (Caasimada Online) – Dabaaldegyo ballaaran oo lama filaan ah ayaa ku faafay Marinka Qaza, Daanta Galbeed iyo gudaha Falastiin iyadoo la dhaqan gelinayo xabad joojinta u dhaxeysa Israa’iil iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiin, waxayna dadka dabaaldegaya muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin guusha ay iska caabbintu ka gaareen Ciidamada Israa’iil oo adeegsanayo hubkii ugu casrisanaa Adduunyada.
Weriyaha Al-Jazeera ee Gaza, Wael Al-Dahdouh, ayaa sheegay in jidadka Marinka Gaza ay buux dhaafiyeen dadweyne aad u fara badan oo u soo baxay dabaaldegga dhammaadka dagaalka Israa’iil ee Marinka, waxaana guud ahaan dhulka Falastiin laga maqlayaa dhawaqa rasaasta oo ah mid loogu mashxaradayo xabad joojinta ay ku qasbanaatay Israa’iil.
Dhammaan jidadka ayey dadweynaha isku soo baxay ka taageyn Calanka Falastiin, midka Dhaqdhaqaaqa Wax-iska-caabbinta Islaamiga (Xamaas) iyo kooxaha kale ee iska caabinta, waxaana dhammaan masaajida laga bilaabay Takbiirta iyadoo la adeegsanayo cod baahiyaal laga maqlayo meelo fog fog.
Sidoo kale waxaa cod baahiyaal laga daaray heyso lagu baraarujinayo kooxaha iska caabinta sidoo kalana lagu ammaanayo dulqaadka ay muujiyeen dadweynaha reer Falastiin ee Masjidka Aqsa, Xaafadaha Qudus iyo xaafadda Sheikh Jarrah ee ku dhegan Buurta Macbadka.
Dabaaldegyo la mid ah ayaa ka dhacay magaalooyinka Daanta Galbeed, dad isugu soo baxay Magaalada Ramallah ayaa salaan sharaf ka qaatay kooxaha iska caabinta iyagoo ugu hambalyeeyey waxqabadka Militari ee muuqda oo ay ka gaareyn dagaalkii ay la galeyn Yahuuda xoogga ku heysato dhulkooda.
Dhanka kale Dabaaldegyo ayaa ka bilowday magaalooyinka Hebron, Nablus, Salfit, Tulkarm, Jerusalem, Hebron iyo kuwa kale isla markii ay xabbad joojintu dhaqan gashay, sidoo kale dabaaldegyo iyo isu soo baxyo ayaa ka dhacay gobollada gudaha ee Falastiin sida Umm al-Fahm, iyo xerada Ain al-Hilweh ee qaxootiga Falastiin ee Lubnaan.
Xabad joojinta ka dhaqan gashay Marinka Qaza saacadihii hore ee Maanta oo Jimco ah ayaa timid kadib markii Masar ay dhex dhexaadisay heshiis u dhexeeya Israel iyo Xamaas oo lagu joojinayo xabadda 11 maalmood.
Golaha wasiirrada Israa’iil waxay xaqiijiyeen iney heshiis xabbad joojin ay la gaareen Falstiiniyiinta si dagaalka tobanka maalmood socday loo joojiyo.
Kooxaha Falastiiniyiinta ee Xamaas iyo Islamic Jihad ayaa markaa kadib bayaan ay soo saareen ku xaqiijiyey aqbalaada xabadjoojinta.
Sarkaal ka tirsan ururka Xamaas oo wakaaladda wararka ee AP u warramay wuxuu sheegay in xabbad joojinta ay Israa’iil ku dhawaaqday ay ka dhigan tahay ‘guul’ shacabka Falastiin u soo hoyatay iyo guul darro soo gaartay Ra’isulwasaaraha Israa’iil Banjamin Natanyahu.